16 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 16 2013
နောက်ဆုံးမိနစ်: BAŞKENTRAYနူးညံ့ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
နောက်ဆုံးမိနစ်: BAŞKENTRAYနုဖျက်သိမ်း: ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီနုBAŞKENTRAYဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), "ကျန်း - တူရကီ-Kayaş LINE (BAŞKENTRAY) ဆောက်လုပ်ရေးယူတည်ဆောက်ပေးနေ [ပို ... ]
ရထားလမ်းအရှည်မြို့နှင့်အညီ: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), ရထားလမ်းရဲ့အရှည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တန်းကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့သင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းနှင့်အညီ, ဤတွင်မြို့ကန့်သတ်အတွင်းမီးရထားလမ်း၏အရှည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြေ ... 2012 TCDD ဒေတာ, ဖွင့်ခြင်းနှင့်သရုပ်ပြပါ။ ထို့ကြောင့် [ပို ... ]
အန္တိအုတ်မြို့သို့ Ropeway Project မှဇွန်လအတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်
လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပုခက်ဇွန်လအတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းမည်ကိုအန္တိအုတ်မြို့၌ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဘို့အချည်ခင်စျေးနှင့်အတူတောင်ပေါ်မှာ Habib Najjar အကြားအန္တိအုတ်မြို့သို့ Ropeway Project မှစီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဇွန်လခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်။ အန္တိအုတ်မြို့မြို့တော်ဝန် Lutfi စစ်ပွဲအကြောင်း [ပို ... ]
native လမ်းရထား Silkworm Bursa အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံမြို့စတုရန်းအတွက်နိုင်ငံသားများမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Durmazlar ဦးပိုင် "Silkworm" ကထုတ်လုပ်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထား၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ရှိမြို့စတုရန်းအတွက်နိုင်ငံသားများမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Silkworm, မြို့လယ်မှာမော်တော်ယာဉ်ဆူညံသံ, အအိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် [ပို ... ]
Bilecik နှင့်ရထားဘူတာရုံတစ်ဦးအမြန်ခဲ့ပေမယ့်တင်ဒါBozüyükeကျင်းပလိမ့်မည်: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအားကြားဘူတာစီစဉ်ထားတင်ဒါ Bilecik နှင့်Bozüyükကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့ကကျင်းပခဲ့မေလ93 တင်ဒါကုမ္ပဏီတက်ရောက်ခဲ့သည် [ပို ... ]
RayHaber 16.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
လျှပ်ကာပစ္စည်းများအလုပ်စုဆောင်း (TÜVASAŞ) Cordless သည့် Gateway မှာစီးပွားရေး Crush ပပျောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းများ၏ပြဌာန်းချက်များတွင်ထရပ်ကား (TÜLOMSAŞ) အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရေးအဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဆေးကြော Aggregate နှင့်မြစ်သဲရထားတော့ဘဲယာဉ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ငှားရမ်းပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) Related ရထားသတင်းနှင့် [ပို ... ]
မြန်နှုန်းရထား Samsun ဖို့ရုန်းကန်
Samsun အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများကိုနှင့်နိုင်ငံရေးစက်ဝိုင်းထဲမှာထိရောက်သောထားပြီးစည်းရုံးရေးအစပျိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီးမှနိုင်ရန်အတွက် Samsun မြန်နှုန်းရထားtümsambရန်ပွဲဗျူရိုကရေစီ။ ပြည်ထောင်စုသမ်မတ Kozal, "ကျနော်တို့ကသုံးရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းနှင့်အတူမိမိနေရာမှသူ Samsun အကယ်. [ပို ... ]
Kütahyaထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာလုပ်ငန်းခွင် Continues Up ကို Set
Kütahyaထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကသတ်မှတ်မည် Up ကိုသူ Work Kütahyaထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာများ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးဟုပြောဆိုရှိသည်သောအလွန်ကြီးစွာသောစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်၌ကြီးသောအရေးပါမှုတည်လိမ့်မည် AK ပါတီလက်ထောက်Kütahya Vural Kavuncu Continues [ပို ... ]
လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပုခက်ဇွန်လအတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအန္တိအုတ်မြို့၌ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဘို့အချည်ခင်စျေးနှင့်အတူတောင်ပေါ်မှာ Habib Najjar အကြားအန္တိအုတ်မြို့သို့ Ropeway Project မှစီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဇွန်လခုနှစ်တွင်ပြီးစီး။7အကြောင်းကိုအန္တိအုတ်မြို့သို့မြို့တော်ဝန် Lutfi စစ်ပွဲ, [ပို ... ]
MHP ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Sezer Tulomsas သွားရောက်လည်ပတ်ရာမှ
MHP ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Sezer Tulomsas အမျိုးသားပါတီလှုပ်ရှားမှုပါတီ (MHP) ဥက္ကဋ္ဌ Ayhan Sezer Eskisehir ပြည်နယ်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကိုဆီ (အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ) မှ General Manager Hayri Avci သွားရောက်ခဲ့သည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင့်မုဆိုး, [ပို ... ]
Karapürçekt cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းစားသုံးသူ2မှ Block ကို "ထုတ်လုပ်သူအတွက်လက်မှုပညာ Anfa များ၏ကုန်သည်များကစီစဉ်သည့်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Melih ဆိုဒ်များဆိုဒ်များ Altinpark ၌တည်လိမ့်မည်။ တူရကီပရိဘောဂလျှော့နေ့ရက်များ "တရားမျှတသောသွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ In-Lakeci Tradesmen နှင့် Artisan ၏ပရိဘောဂတူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်း [ပို ... ]
tramcars5မှ Samsun2။ လုပ်ငန်းခွင် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) စင်ပေါ်မှာစတင်
tramcars5မှ Samsun2။ ဇာတ်စင်အလုပ်စင်မြင့်၏ပြီးစီးပြီးနောက်ပေါ်လာတာဟာအရင်အဘို့အ52 LRT မော်တော်ယာဉ်ဒီဇိုင်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသော CNR (တရုတ်) ကုမ္ပဏီများစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအဆင့် Started ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 08 ၏အဖြစ် [ပို ... ]
တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Sakarya TÜVASAŞ (TÜVASAŞ) တွင်ခိုးမှုaş.'nသူတို့အနီရောင်လက်ဖမ်းမိစက်ရုံxnumxşüphelကနေစျေးကြီးကြေးနီပစ္စည်းခိုးယူပြောဆိုထားသည်။ သူတို့ကတရားခံပေါင်3150 စျေးကွက်တန်ဖိုးတွေ့သောပစ္စည်းကိုအပိုင်းပိုင်းခိုးလေ၏။ ခိုးမှုယခုအချိန်တွင်နှင့်သံသယရှိသူဖမ်းဆီး [ပို ... ]
Karapürçektစားသုံးသူ2မှ Block ကို "ထုတ်လုပ်သူအတွက်လက်မှုပညာ Anfa များ၏ကုန်သည်များကစီစဉ်ဆိုက်မြို့တော်ဝန် Melih ဆိုဒ်များ Altinpark ဖို့ထူထောင်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း။ တူရကီပရိဘောဂလျှော့နေ့ရက်များ "တရားမျှတသောသွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီပရိဘောဂ-Lakeci Tradesmen ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် Artisan [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (175) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)